Etu esi lelee, wepu, ma gbochie Malware na WordPress saịtị | Martech Zone
Etu esi lelee, wepu, ma gbochie Malware na WordPress saịtị gị
Izu a bụ ezigbo ọrụ n'aka. Otu n'ime uru na-abaghị uru nke m maara hụrụ onwe ha na nnukwu nsogbu - saịtị WordPress ha bu malware. Ejiri saịtị ahụ wee dee edemede na ndị ọbịa mere ihe abụọ dị iche:
Agbalịrị ibunye Microsoft Windows na malware.
Achọpụtara m na enwere ebe nrụọrụ ahụ mgbe m gara na ya mgbe m pịrị na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ha, agwara m ha ozugbo banyere ihe na-eme. O di nwute, ọ bụ ọgụ na-eme ihe ike na m nwere ike iwepụ mana weghachite saịtị ahụ ozugbo m ga-adị ndụ. Nke a bụ ezigbo omume ndị malware hackers na - eme - ọ bụghị naanị na ha na saịtị ahụ, ha na-agbakwunye onye ọrụ nhazi na saịtị ahụ ma ọ bụ gbanwee isi faịlụ WordPress nke na-agbanyeghachi mbanye anataghị ikike ma ọ bụrụ na ewepụ ya.
Malware bụ nsogbu na-aga n'ihu na weebụ. A na-eji Malware eme ka ọnụọgụ pịa-na ọnụego na mgbasa ozi (ad ad), wulite ọnụ ọgụgụ saịtị iji zubiga ndị mgbasa ozi, iji gbalịa nweta nnweta nke data esenowo na nkeonwe ya, na nso nso a - ka m cryptocurrency. A na-akwụ ndị na-egwuputa ego ụgwọ nke ọma maka data ngwuputa ego mana ego ha ji arụ igwe eji egwu igwe na ịkwụ ụgwọ ọkụ eletrik maka ha dị mkpa. Site n'iji kọmputa na-arụ ọrụ na nzuzo, ndị na-egwuputa ihe nwere ike ịkpata ego na-enweghị ego.
WordPress na nyiwe ndị ọzọ na-ahụkarị bụ nnukwu ebumnuche maka ndị na-agba ọsọ n'ihi na ha bụ ntọala nke ọtụtụ saịtị na weebụ. Ọzọkwa, WordPress nwere isiokwu na ngwa mgbakwunye ihe owuwu nke na-anaghị echebe faịlụ saịtị ndị dị na oghere nche. Ọzọkwa, ndị WordPress obodo pụtara ìhè na-achọpụta na patching nche oghere - ma nwe nwe adịghị dị ka ịmụrụ anya banyere idebe ha na saịtị emelitere na ọhụrụ nsụgharị.
A kwadoro saịtị a na GoDaddy websaịtị ọdịnala (abụghị Jikwaa WordPress Bochum), nke na-enye efu nchebe. N'ezie, ha na-enye a Malware nyocha na iwepụ ọrụ, ọ bụ ezie. Jikwaa WordPress Bochum ụlọ ọrụ ndị dị ka Flywheel, WP Engine, LiquidWeb, GoDaddy, na arụsị niile na-enye mmelite na-akpaghị aka iji mee ka saịtị gị dị ọhụrụ mgbe anyị mere ka amata na patched anyị. Imirikiti nwere nyocha malware na isiokwu ojii na plugins iji nyere ndị nwe saịtị aka igbochi mbanye anataghị ikike. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu n'ihu - Kinsta - njikwa arụmọrụ jikwaa WordPress nnabata - ọbụnadị na-enye a nchekwa nkwa.
Enyere aha saịtị gị na Blacklist maka Malware:
Enwere ọtụtụ saịtị n'ịntanetị nke na-akwalite "ịlele" saịtị gị maka malware, mana buru n'uche na ọtụtụ n'ime ha anaghị enyocha saịtị gị ma ọlị na oge. Nnyocha oge malware na-achọ ngwa ngwa nke ndị ọzọ na-enweghị ike ịnye nsonaazụ ozugbo. Saịtị na-enye ozugbo elele bụ saịtị na mbụ hụrụ gị na saịtị nwere malware. Offọdụ n'ime saịtị ndị na-enyocha malware na weebụ bụ:
Nkwupụta Ngosiputa Google - ọ bụrụ na e debara aha saịtị gị na Webmasters, ha ga-agwa gị ozugbo mgbe ha na-abanye na saịtị gị ma chọta malware na ya.
Weebụ Norton Nchekwa - Norton na-arụkwa ọrụ ntanetị ihe nchọgharị weebụ na sistemụ arụmọrụ nke ga-egbochi ndị ọrụ site na mgbede mepee ibe gị ma ọ bụrụ na ha depụtara ya. Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịdebanye aha na saịtị ahụ ma rịọ ka a nyochaa saịtị ha ozugbo ọ dị ọcha.
Sucuri - Sucuri na-ejigide ndepụta saịtị malware yana mkpesa na ebe edegoro ha. Ọ bụrụ na ehicha saịtị gị, ị ga - ahụ a Mee ka Nyochaa ọzọ jikọta n'okpuru ndepụta (na obere mbipụta). Sucuri nwere ngwa mgbakwunye pụtara ìhè nke na - achọpụta nsogbu… wee mee ka ị banye na nkwekọrịta kwa afọ iji wepu ha.
Yandex - Ọ bụrụ na ị chọọ Yandex maka ngalaba gị wee hụ “Dabere na Yandex, saịtị a nwere ike ịdị njọ ”, ị nwere ike ịdebanye aha maka Yandex webmasters, tinye saịtị gị, ịnyagharịa na Udo na imebi iwu, ma rịọ ka e kpochapụ saịtị gị.
Phishtank - hafọdụ hackers ga-etinye phishing n'ihendesịta na gị na saịtị, nke nwere ike ina gị na ngalaba edepụtara dị ka phishing ngalaba. Ọ bụrụ na i tinye ihu, URL zuru ezu nke ibe malware a na-akọ na Phishtank, ị nwere ike ịdebanye aha na Phishtank ma tụọ votu ma ọ bụ saịtị phishing n'ezie.
Ọ gwụla ma edebanye aha saịtị gị ma nwee akaụntụ nlekota oru ebe, ị nwere ike ịnweta akụkọ sitere n'aka onye ọrụ nke otu n'ime ọrụ ndị a. Elegharala njikere anya… ebe ị nwere ike ọ gaghị ahụ nsogbu, nkwenye ụgha anaghị adịkarị. Okwu ndị a nwere ike ịnweta de-indexed site na engines ọchụchọ ma gbochie ya na ihe nchọgharị. Nke ka njọ, ndị ahịa gị na ndị ahịa gị nwere ike ịjụ ụdị nzukọ ha na-arụ.
Kedu ka I si enyocha maka Malware?
Ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ ndị dị n'elu na-ekwu maka otu esi esi ike ịchọta malware mana ọ naghị esiri ya ike. Ihe siri ike na-achọpụta n'ezie otú o si banye na saịtị gị! A na-enwekarị koodu ọjọọ na:
mmezi - Tupu ihe ọ bụla, gosi ya a mmezi peeji nke ma kwado ebe nrụọrụ gi. Ejila ndozi ndabara nke WordPress ma ọ bụ ngwa mgbakwunye dị ka ndị ahụ ka ga-eme WordPress na sava ahụ. Wantchọrọ ijide n'aka na ọ nweghị onye na-eme faịlụ ọ bụla PHP na saịtị ahụ. Mgbe ị nọ ya, lelee nke gị .htaccess faịlụ na sava weebụ iji hụ na ọ nweghị koodu ọgba aghara nke nwere ike ibugharị okporo ụzọ.
search faịlụ saịtị gị site na SFTP ma ọ bụ FTP ma chọpụta mgbanwe faịlụ kachasị ọhụrụ na plugins, gburugburu, ma ọ bụ isi faịlụ WordPress. Mepee faịlụ ndị ahụ ma chọọ nhazigharị ọ bụla na-agbakwunye ederede ma ọ bụ iwu Base64 (ejiri zoo ihe nkesa-edemede egbu).
Tụlee isi WordPress faịlụ na ndekọ mgbọrọgwụ gị, ndekọ wp-admin, na wp-gụnyere akwụkwọ ndekọ iji hụ ma faịlụ ọhụrụ ọ bụla ma ọ bụ faịlụ dị iche dị iche dị. Edozi nsogbu faịlụ ọ bụla. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọta ma wepụ mbanye anataghị ikike, na-achọ ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-ahapụ azụ iji megharịa saịtị ahụ. Ekwela ka edegharịa ma ọ bụ wụnye WordPress… hackers na-agbakwunye ederede obi ọjọọ na ndekọ mgbọrọgwụ wee kpọọ edemede ahụ ụzọ ọzọ iji gbanye mbanye anataghị ikike. Ihe ederede malware na-adịchaghị mgbagwoju anya na-etinye naanị faịlụ edemede na isi.php or footer.php. Ihe ederede dị mgbagwoju anya ga-agbanwezi faịlụ PHP ọ bụla na sava ahụ na koodu ntinye ọzọ ka ị nwee ike wepụ ya.
wepụ ederede edemede nke atọ nke nwere ike ịbụ isi iyi. Ajụla m itinye netwọọdụ mgbasa ozi ọhụụ mgbe m gụrụ na ha abanyela n'ịntanetị.
Tulee gị posts nchekwa data table maka agbakwunyere n'ihendesịta na peeji nke ọdịnaya. Nwere ike ime nke a site na ịme nyocha dị mfe site na iji PHPMyAdmin na ịchọ arịrịọ URL ma ọ bụ mkpado ederede.
Tupu ị tinye na saịtị gị ndụ… ọ bụ ugbu a bụ oge kwesie gị na saịtị iji gbochie ihe ozugbo re-ogwu ogbugba ma ọ bụ ọzọ mbanye anataghị ikike:
Kedụ ka I si egbochi ebe nrụọrụ gị ka etinyere ya na malware arụnyere?
nyochaa onye ọrụ ọ bụla na weebụsaịtị. Ndị na-agba ọsọ na-agbasasị edemede nke na-agbakwunye onye ọrụ nhazi. Wepu akụkọ ochie ọ bụla ma ọ bụ nke ejibeghi ma degharịa ọdịnaya ha na onye ọrụ dị adị. Ọ bụrụ na ị nwere onye ọrụ aha ya admin, tinye onye nchịkwa ohuru nwere nbanye pụrụ iche wee wepu akaụntụ nchịkwa kpamkpam.
Tọgharịa paswọọdụ onye ọrụ ọ bụla. A na-egbu ọtụtụ saịtị n'ihi na onye ọrụ jiri paswọọdụ dị mfe nke echepụtara na mwakpo, na-enyere mmadụ aka ịbanye na WordPress ma mee ihe ọ bụla masịrị ha.
gbanyụọ ike idezi plugins na gburugburu site na WordPress Admin. Ikike idezi faịlụ ndị a na-enye onye ọ bụla hacker ohere ime otu ihe ma ọ bụrụ na ha enweta ohere. Mee ka isi WordPress faịlụ ghara ideghari ya ka ederede wee ghara ideghari koodu isi. Ihe niile n’otu nwere ezigbo ngwa mgbakwunye na-enye WordPress isi ike na ton nke atụmatụ.
Iji aka budata ma wụnye ụdị nsụgharị ọ bụla ị chọrọ ma wepu mgbakwunye ọ bụla ọzọ. Kpamkpam wepu nhazi plugins na-enye kpọmkwem ohere na saịtị faịlụ ma ọ bụ nchekwa data, ndị a dị ize ndụ karịsịa.
wepụ ma dochie faịlụ niile dị na ndekọ ndekọ mgbọrọgwụ gị ma e wezụga folda wp-ọdịnaya (yabụ mgbọrọgwụ, wp-gụnye, wp-admin) site na ntinye ọhụụ nke WordPress ebudatara ozugbo na saịtị ha.
Nọgide Na-enwe gị na saịtị! Saịtị m rụrụ ọrụ na ngwụcha izu a nwere ụdị ochie nke WordPress nwere oghere nche, ndị ọrụ ochie nke na-ekwesịghị ịnweta ọzọ, isiokwu ochie, na plugins ochie. O nwere ike ịbụ na otu n'ime ndị a meghere ụlọ ọrụ maka ịbanye. Ọ bụrụ n’inweghị ike ịkwụ ụgwọ ijikwa saịtị gị, jide n’aka na ị ga-ebuga ya na ụlọ ọrụ na-elekọta ndị ọbịa ga-eme ya! Imefu ego ole na ole na Bochum nwere ike ịchekwa ụlọ ọrụ a ihere a.
Ozugbo i kwenyere na ị meziela ihe niile ma sie ike, ị nwere ike weghachite saịtị ahụ site na iwepu ya .htaccess ibugharị. Ozugbo ọ dị ndụ, chọọ otu ọrịa ahụ dịbu na ya. M na-ahụkarị iji nyocha ihe nchọgharị iji nyochaa arịrịọ netwọk site na ibe. M soro ala ọ bụla na netwọk arịrịọ iji hụ na ọ bụghị malware ma ọ bụ ihe omimi… ọ bụrụ na ọ bụ, ọ laghachiri n'elu na-eme nzọụkwụ nile ọzọ.
I nwekwara ike ahu nagide ihe oké ọnụ-atọ ndị ọzọ ọrụ nyocha malware dị ka N'Scntanet nyocha, nke ga-enyocha saịtị gị kwa ụbọchị ma mee ka ị mara ma ị na-edebanye aha gị na ọrụ nlekota malware. Cheta - ozugbo saịtị gị dị ọcha, agaghị ewepụ ya na ndepụta ojii. Kwesịrị ịkpọtụrụ onye ọ bụla na-arịọ arịrịọ kwa anyị ndepụta n'elu.
Inweta hacked dị ka nke a abụghị ihe ọchị. Ndị ụlọ ọrụ na-ana ọtụtụ narị dollar iji wepu egwu ndị a. Arụrụ m ọrụ na-erughị oge 8 iji nyere ụlọ ọrụ a aka ihicha saịtị ha.
Tags: ESETNchọgharị Nchekwa Googlegotlmsmalwarenyocha malwareWeebụ Norton Nchekwanorton safesitePhishTankSiteAdvisorsophosSpamHaus DBLsuuruSucuri Malware ụlọ nyochaWordPressYandex